कन्डम त तपाईहरु सबैले प्रयोग गर्नु भएकै होला, तर आखिर कन्डम बन्छ कसरी? भिडियोमा हेर्नुहोस - Enepal Serofero
कन्डम त तपाईहरु सबैले प्रयोग गर्नु भएकै होला, तर आखिर कन्डम बन्छ कसरी? भिडियोमा हेर्नुहोस
कन्डम त तपाईहरु सबैले प्रयोग गर्नु भएकै होला, तर आखिर कन्डम बन्छ कसरी? भिडियोमा हेर्नुहोस् (भिडियो अन्तिममा छ)
यो पनि पढ्नुहोस : पोर्न स्टारहरुको जीवन कस्तो हुन्छ र कति कमाउँछन् ?
पोर्न स्टारहरुको जीवन कस्तो हुन्छ र कति कमाउँछन् उनीहरुले ? पोर्न फिल्म इन्डस्ट्री जति विवादित हुन्छ, त्यति नै धेरै कन्ट्रोवर्शियल एडल्ट स्टार मानिन्छन् । र, कति समय टिक्छन् ? भन्ने च्यालेन्ज पनि हुन्छ ।
यी सबैको जवाफ एडल्ट स्टार, साइट ओनर र निर्माता सिरीले एक अन्र्तवार्तामा दिएका थिए । समाचार एजेन्सीहले चर्चा गरे अनुसार यसमा सिरीले बताएका थिए कि महिला एडल्ट स्टारले एक सीन दिएवापत बढीमा ६५ हजार भारु नेपाली ९७ हजार ५ सय कमाउँछन् ।
पोर्न स्टारको यस्तो हुन्छ शेड्युल – दैनिक शेड्युल बिहान ६ बजेबाट सुरु हुन्छ । उनीहरुलाई ६ बजे सुटकेस तयार गर्न लागाइन्छ । – १० बजे कारमा बसिसको हुन्छन् । उनीहरु आधा घण्टा अगाडि सेटमा पुग्नुपर्छ । त्यसैले उनीहरु ११ बजे अघि सेटमा पुग्नपर्छ । – ११ बजे पेपरवर्क सकेपछि डेढ घण्टामा हेयर र मेकअप हुन्छ ।
– १२ बजे सोलो फोटोशुट गराइन्छ । जसमा लगभग १ घण्टा लाग्छ । – दिउँसो १–२ बजे मेल पोर्न स्टार आइपुग्छ । र, पेपरवर्क कम्पलिट गर्छ । यसबीच क्रु लाइट्सको एरेञ्जमेन्ट हुन्छ । – २ बजे पोर्न स्टार महिला र पुरुषबीच चिनजान र भिडियोशुट हुन्छ । सिचुएशन र सेटअपका हिसाबले लगभग २ घण्टा लाग्छ । – ४ बजे मेल र फीमेल पोर्न स्टारलाई सेक्स गराइन्छ । र, फोटो खिचिन्छ । – ६ बजे मेल र फीमेल पोर्न स्टारको भिडियोशुट हुन्छ । – ७ बजे अगाडि भिडियोका शोफ्टकोर लिइन्छ । यसमा करिब डेढ घण्टा लाग्छ । – ६ ः १५ अगाडि फ्रि भएमा उनीहरुलाई पेमेन्ट दिइन्छ अर्थात पोर्न स्टार्स चेक लिएर जान्छ । उनीहरुलाई एक साताको म्याद राखेर चेक दिइन्छ । निर्माता सिरीका अनुसार मेल र फीमेल पोर्न स्टारको कमाइमा धेरै अन्तर हुन्छ । यहाँ फीमेलले मेलको भन्दा धेरै पैसा पाइन्छ । एजेन्सी
स्वस्थानी ब्रत कथा सुरू अवश्य सेयर गरी (कथा भाग२ सुन्नुहोस् तपाँईका अधुरा काम पूरा हून)
दुधको चिया शरीरमा गएर यसरी बन्छ विष । सक्दो सेयर गराैँ !!!
लडिरहेकी बृन्दा थापा मगरको ट्यांकरले पेटमै पाँग्राले किच्दा आन्द्रा भुँडी नै बाहिर निस्केको थियो [भिडियो हेर्नुहोस ]
असफल अन्तरजातीय विवाहको परिणाम श्रीमतीको ज्यान लिए अनि आफ्नो ज्यान पनि लिए [भिडियो हेर्नुहोस ]
Prevअबको मेरो नयाँ बेहुला दुबईको आइटी कम्पनीका मालिक मिना ढकाल
Nextशक्तिशाली बम बिष्फोट १३ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु, ३२ जना घाईते
विदेशमा रहेका श्रीमानसंग सेक्स भिडियो कल गर्दै धादिंगकी १८ बर्षिय युवती.लिक भएको क्लिप (14,975)
मगर्नी भाउजूको कथा (14,115)
वाइन पिउँदै भाउजु संग बितायाको त्यो रात (11,599)
राजधानीमा अचम्मको बलात्कार – सुन्दा तपाइको होस् उड्छ! (10,098)
जात अनुसार नाक आँखा र फेस फरक भएझै के जात अनुसार महिलाको योनी पनि भिन्न भिन्न हुन्छ ? (8,616)
धादिङको मलेखुबाट नाइट बसमा किचकन्या चढेपछी हंगामा (हेर्नुहोस भिडियो) (8,477)